June 2009 - शखदा साहित्य
यति धेरै तिम्रो माया कहाँ राखू लुकाई
12:00 PM गीत, पद्य
परेलीले बोलिरहेछ मुटुभित्र नअटाई
के मागु संसारमा त्रि्रो माया बाहेक
छैन कुनै पल बाकी तिम्रो सम्झना सिवाय
ज्ति दिए नसकिने तिम्रो माया सायद
झुटो माया देखाउने जल्ने छन सायद
अजम्बरी तिम्रो माया मर्ने छैन कहिल्यै
पोखिन्छ कि कतै भनी सम्हालु म जसै
पगपगमा तिम्रो माया ढुकढुकीमा तिमी
तिमी सिवाय संसारमा मेरो प्राप्ति छैन कुनै
'साहित्य समाजको प्रतिबिम्ब हो'
12:43 PM अन्तरवार्ता
(जनमत साहित्यिक पत्रिका अङ्क - १३६ मा प्रकाशित अर्न्तवार्ता)
तपाईको साहित्यलेखनको थालनी कसरी भयो ?
- म साहित्यलेखन क्षेत्रमा आउन केही ढिला भएको हो । जब जीवनलाई नजिकबाट चिनेर धेरै कुरा बुझ्दै गए अनि साहित्यमा आकषिर्त हुन थालेँ । समाजमा भएका रुढीगत अन्धविश्वास, विसंगति र विकृतिले मलाई सत्यको खोजीमा डोर्‍यायो । यस्तै सहाराको खोजीमा साहित्यतिर आकृष्ट भएँ । जहाँ म आफू पोखिन पाउँछु र आत्मसन्तुष्टि मिल्छ मलाई ।
साहित्य-सिर्जना गर्ने भावना र प्रेरणा कसरी कोबाट पाउनुभयो ?
- साहित्य-सिर्जना गर्ने भावना विशेषरूपले यहीबाट पाए भन्ने छैन । म सानैदेखि अलिक बेग्लै स्वभावकी थिएँ । घरमा छोरा र छोरीप्रति गरिने भेदभाव र महिलाको अवस्था देखेर म विरक्त हुन्थे । म सम्पन्न परिवारमा जन्मे पनि हाम्रो घरमा शैक्षिक वातावरण थिएन । बुबाका गाडीहरू थिए र ठेक्कापट्टा गर्नुहुन्थ्यो । पैसा प्रशस्त कमाउनु भएको थियो । उहाँलाई शिक्षामा रुची थिएन । हाम्रो ठूलो परिवार थियो । हामी दुई आमाका दस जना सन्तान एउटै परिवारमा हुर्केका थियौँ । मेरी आमा कान्छी हुनुहुन्थ्यो । म सानो छदा काकाकाकी सबै एकै ठाउँमा थियौँ । त्यससमयमा बालबालिका र महिलाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो । बालअधिकार र बालमनोविज्ञान कुन चरोको नाम हो भन्ने थियो । म यी कुराले भित्रभित्रै आन्दोलित हुन्थेँ । मेरी आमा केही पढ्नुभएको हुनाले छोरीमान्छेले पढ्नपर्छ । आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । त्यसैले म भेटेजति पुस्तक पढीरहन्थेँ । तर उचित मार्गदर्शन र प्रेरणा पाउन सकिनँ । मन कुण्ठित हुन्थ्यो । त्यसैपनि छोरीमान्छे पढ्ने वातावरण थिएन । म सामान बेरिएका पत्रिका पढ्ने गर्दथे । पढ्ने पुस्तकको अभाव खटकीरहन्थ्यो । बिहे भएर गएपछि पनि म निरन्तर पढिरहन्थेँ । बिहेपश्चात मैले आइए र बिए प्राइवेट पास गरेकी थिएँ । एसओएसमा जागिर खान थालेपछि पढ्ने वातावरण अझ बढ्यो र साहित्यिक वातावरण पनि । म केही लेख्दै फ्याक्दै गर्थे । पछि मेरो जीवनमा यस्तो मोड आयो म अस्तित्वबोधको पीडाले मर्माहत भएँ । अफिसमा, घरमा, समाजमा नारीको अवस्था र उसले भोग्नुपरेको नियतिले विक्षिप्त भएँ । त्यसपछि अस्तित्वको खोजी गर्दै साहित्यको सहारा लिन पुगेँ । सहारालिने क्रममा धेरै समयअघि लेखेको 'सानी' बालमनोवैज्ञानिक उपन्यास प्रकाशित गरेँ । जसले साझा बालसाहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । मेरो पहिलो पुस्तकले राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेपछि म लेखनमा तन्मयका साथ लागी परेँ । त्यसपछि सानीको भाग दुई 'सानीको साहस' लेखेँ त्यसले पनि अन्तरार्ष्टिय नेपाली साहित्य समाजको सर्वोत्कृष्ट नारी हस्ताक्षर पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । ममा चुनौति र दायित्व थपिँदै गयो । राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा पनि मेरा कथा र लेखहरू छापिन थालेका थिएँ । त्यसपछि एसओएसको राम्रो जागिर छोडेर सम्पूर्ण रूपले साहित्यमा समर्पित भएँ ।
साहित्य सेवामा निरन्तर लागिपर्नु भएकी तपाई यसबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
- हुन त म साहित्यको अध्ययन धेरै अघिदेखि गर्थे तर वि. स. २०६० देखि पुस्तक प्रकाशन गर्ने रचनाहरू छापिने गरेको हुनाले मलाई भर्खर साहित्यमा लागेको ठान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । तर यसरी भर्खर लागेको भए पाठकको मनलाई छुने साहित्यसिर्जना गरेर पुरस्कार र सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने थिइनँ हुँला यसको लागि मैले नेपथ्यमा बसेर साहित्यको धेरै साधना गरेकी छु । तर झट्ट हेर्दा भर्खर लागेकी हो भन्ने भ्रमचाहिँ हुन्छ नै । म मैले गरेको साहित्यसेवाबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैन । मलाई लाग्छ मैले अझै धेरै लेख्नुछ । समयले राष्ट्रले मसँग धेरै आशा गरेको छ । मेरो साहित्यलेखनको अभीष्ट भनेको नै बच्चादेखि वृद्धासम्मको ढुकढुकीमा बास बस्नु हो । त्यसैले त्यो अहिले पूरा भएको छैन । र्सवप्रथम बालसाहित्यमा राम्राभन्दा राम्रा पुस्तक लेखू भन्ने लागेको छ । जुन अभाव पनि छ । म थोरै लेखू राम्रो लेखू भन्ने मान्यता राख्छु । फेरि दुई प्रकाशित पुस्तकले लगातार राम्रो पुरस्कार पाएको हुनाले आफूभित्र केही छ भन्ने पनि ठानेकी छु । तर नेपाली बालसाहित्यले गर्व गर्ने पुस्तक 'सानी' र 'सानीको साहस' जति चर्चित हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेन । त्यसमा चाहिँ दुख लागेको छ । यति धेरै साधना, लगानी गरेर निकालेको पुस्तकलाई भनेजस्तो गरी बालबालिकाको हातमा पुर्‍याउन सकिनँ । यो कुरा धेरै ठाउँमा उठाए तर सुनिएन । दुवै पुस्तकले गरिमामय पुरस्कार प्राप्त गरेर धेरैजनाले मन पराउँदा पनि सञ्चार माध्यमबाट सहयोग नहुँदा उपेक्षितजस्तो भयो । यसले दुखी बनाएको छ । अब सानीको धारावाहिकको भाग ३ लेख्ने ठूलो चुनौति छ । अघिका पुस्तकभन्दा नराम्रो लेख्नु भएन । सानीलाई अङ्गे्रजीमा अनुवाद गरी विश्व बालसाहित्यमा पुर्‍याउने प्रयास गर्दै छु । तर प्रकाशनका अप्ठ्यारापक्षले गारो बनाएको छ । प्रौढ साहित्यमा एउटा राम्रो कथासङ्ग्रह तयारी अवस्थामा छ । चाडै नै प्रकाशित गर्ने जमर्को गर्दै छु ।
नेपाली साहित्यमा महिला लेखिकाको भूमिका र अग्रसारिता सम्बन्धमा तपाइँ कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?
- नेपालीसाहित्यमा महिलाको भूमिका अत्यन्तै न्युन अवास्थामा छ । हुन त पुरुषलाई पनि सहज नभएको ठाउँमा नारीलाई नहुनु स्वभाविकै हो । यो क्षेत्रमा नारीलाई धेरै गारो छ । समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने महिलाले साहित्यमा थोरै्र लेख्नुलाई पनि महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। तर यसो भनेर स्तरीयतामा नजानू भनेको चाहिँ होइन । पुरुषको प्रतिस्पर्धामा नगई आफ्रनो परिचय बन्न सक्दैन । त्यसको लागि महिलाले ठूलो लगानी, त्याग, साधना गर्नुपर्छ । जुनकुरा गर्न धेरै कम महिलालाई मात्र सौभाग्य प्राप्त हुन्छ । यी कुरा प्राप्त गरेर मात्र पनि हुँदैन स्वयम्मा प्रतिभा पनि हुनुपर्छ । यी सबैकुरा भाग्यबश कुनै नारीले पाइ भने मात्र ऊ पुरुषको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छे । नत्र उसमा प्रतिभा भए पनि त्यो त्यसै ओइलाएर जान्छ र कतिपय प्रतिभा गइरहेका छन् । यही पर्रि्रच्छेमा नारीलाई साहित्यमा अग्रसर गराउन हामीले इटहरीमा उत्खनन् नारी साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छौँ । अहिले बिस्तारै बामेसर्दै आएको नारी साहित्यलेखन केही फस्टाएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि नारीलाई साहित्यलेखनका लागि उपर्युक्त वातावरण प्राप्त भइसकेको छैन । सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट नारी साहित्यलेखनलाई प्रशस्त हौसला, प्रेरणा र सुबिधा प्राप्त हुनुपर्छ ।
साहित्यकारहरू आ-आफ्नो विचार वा दृष्टिकोणलाई कलात्मक तरिकाले उद्घाटन गर्ने माध्यम साहित्यलाई बनाउँछन् । वास्तवमा साहित्यमा मुख्य कुरो सिद्धान्त र दृष्टिकोण हुन्छ र त्यसलाई मार्मिक रुपमा जनसमक्ष पुर्‍याउन र उनीहरूलाई हृदयङ्गम गराउन कलात्मक सौर्न्दयसाथ प्रस्तुत गरिन्छ, यो भनाइप्रति तपाईको के धारणा छ ?
- साहित्य समाजको प्रतिबिम्ब हो । साहित्यमा सिद्धान्त, धार र विचार हुनु स्वभाविकै हो । तर सबै साहित्यकारले प्रस्तुत गरेका छैनन् । पाश्चात्य साहित्य विभिन्न धार र सिद्धान्तमा फैलिँदै यहाँसम्म आएको छ । यसको प्रभाव नेपाली साहित्यमा पनि परेको छ । मेरो विचारमा साहित्यको कुनै सिद्धान्त र विचारमा खुम्चेर लेखिनु हुँदैन । स्वतन्त्ररूपले समाजका हरेक पाटोलाई कलात्मकरुपले प्रस्तुत गरिनुपर्छ । साहित्यमा समाजको ढुकढुकी बोलेको हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो साहित्य उत्कृष्ट हुनपुग्दछ । साहित्यमा राष्ट्रियता र मानवतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर समाजको यथार्थ चित्रणलाई कलात्मकताले सजाएर प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।
हाल विभिन्न साहित्यिक प्रतिष्ठानका गतिविधि र साहित्यिक धारा को सम्बन्धमा तपाई कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?
- हाल धेरै साहित्यिक सङ्घसस्था र प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् । वास्तवमा यो खुसीको कुरो हो किनभने यस्ता सङघसस्थाले साहित्यमा ठूलो टेवा दिन सक्छन् र कतिपय नाम चलेका सङ्घसस्थाले दिइ पनि राखेका छन् । विशाल देशको साहित्यिक क्षेत्रको मूल्याङ्कन साझा प्रकाशन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मात्र थाम्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नीजिक्षेत्रबाट खोलिएको साहित्यिक सङ्घसस्था र प्रतिष्ठानबाट मदत मिले साहित्यलाई ठूलो टेवा प्राप्त हुन्छ । तर कतिपय सङ्घसस्था राजनैतिक आस्था र गुटबन्दीले ग्रस्त छन् । नातावाद , कृपावाद र आर्शीवादको आधारमा पुरस्कार दिने र पुस्तक छपाउने जस्ता क्रियाकलापले विकृति पैदा भइरहेको छ । यस्ता सङ्घसस्था आलोचनाबाट मुक्त छैनन् ।
तपाईलाई मनपर्ने स्वदेशी र विदेशी लेखकहरूको को हुनुहुन्छ ? कृपया बताइदिनुहुन्छ कि ?
- मलाई यही लेखक मनपर्छ र यही कृति मन पर्छ भन्ने छैन । राम्रा लेखकका प्राय राम्रा कृति सबै मनपर्छ । विदेशी लेखकको पुस्तकहरू पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मौका भनौ वा समय नपाउँदा दुख लाग्छ । तर पनि गोर्कीको 'आमा' गोल्डिङ्गको 'द लर्ड अफ द फ्याइज' त्यस्तै टैगोरको काबुलीवाला अन्य नाम चलेका लेखक मोपासा समरसेट मम आदिका पुस्तक राम्रो लाग्छ । नेपाली नाम चलेका लेखकका नाम चलेका पुस्तकहरू प्राय पढेकी छु । नेपाली भाषा साहित्यलाई फलाउने फुलाउन योगदान दिनुहुने विशिष्ट साहित्यकारहरूको आ-आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । जुन पृष्टभूभिमा आज नेपाली साहित्य मौलाउँदै गएको छ । नाम नचलेका लेखकका पनि कतिपय रचनाहरू राम्रा लाग्छन् । प्रायजसो म समकालीन साहित्य पढ्न रुचाउँछु । र लेखनमा पनि नयाँ शैलीको प्रयोग गर्न रुचाउँछु ।
तपाईलाई सधैँ सम्झना रहिरहने कुनै साहित्यिक रोचक घटना भए कृपया झर्को नमानीकन उल्लेख गरिदिनु होला?
- मेरो जीवनको ठूलो साहित्यिक रोचक घटना भनेको मेरो पुस्तक 'सानी' छापेर विमोचन गरेको एक हप्तापछि कथाकार परशु प्रधानले एउटा साहित्यिक माहौलमा यसो भन्नुभएको थियो - 'तपाईको यो पुस्तक उत्कृष्ट छ । यसले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुपर्छ । तपाईको यो छोरा हो यसले तपाईलाई पाल्छ ।' उहाँले यसो भन्नुहुँदा मैले पत्याएकी थिइनँ । तर त्यसो भन्नुभएको ठीक एकवर्षपछि त्यो पुस्तकले साझा बालसाहित्य पुरस्कार -२०६० प्राप्त गर्‍यो । मलाई अचम्म लाग्यो कस्तो भविष्यवाणि मिलेको भनेर । पुरस्कार पाउँदा म धेरै खुसी भएँ । पहिलो पुस्तकले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउँदा मेरो खुसीको सीमा थिएन । यो पुरस्कार सत्यको जीत पनि थियो । पुरस्कारको घोषणापछि म रोएकी थिएँ । हुन त यो पुस्तकलाई धे्रै जनाले राम्रो भनेर प्रशंसा गरिसक्नुभएको थियो ।
तपाइँको पहिलो प्रकाशित रचना कुन हो र तपाईका प्रकाशित लेख रचनाहरू मध्ये सबभन्दा मनपर्ने कुन रचना हो ?
- मेरो पहिलो लेख विस २०५५ सालमा समष्टिमा छापिएको कथा 'असफल सङ्धर्ष हो । योभन्दा अघि पनि कविता र लेख छापिएका थिए तर ती आधिकारीक छैनन् । त्यसैले यसैलाई प्रथम मानेकी छु । स्रष्टालाई आफ्ना सबै रचनाको उत्तिकै माया लाग्दो रहेछ तर कसैलाई अलिक बढी मिहिनेत र कसैलाई अलि कम पर्ेको हुन्छ । हालसम्म मेरा चारवटा बालकृति आफ्नै प्रकाशनबाट भइसकेका छन् भने साझाबाट एउटा भएको छ । यी मध्ये मलाई सानीको धारावाहिक र 'स्वणिर्मा' बालउपन्यास धेरै प्यारो लाग्छ । त्यस्तै प्रौढ कथाहरूमा 'सुकन्या उर्फनिलिमा' द्वन्द्वकथालाई सबैले मेरो साहित्यिक यात्राको कोसेढुङ्गा मान्नुभएको छ । म कथालाई धेरैचोटि परिमार्जन गरेर मात्र पाठक सामु ल्याउँछु । कुनै कथा परिमार्जन गर्न मलाई तीन वर्षम्म पनि लागेको छ । एउटा कथासङ्ग्रह 'समयको क्यानभासमा' छापिने प्रक्रियामा छ । त्यो कथासङ्ग्रहलाई धेरैले मन पराइदिनुभएको छ । त्यस्तै एउटा कथोपन्यास पनि तयार हुँदैछ । अहिले कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू सम्बोधनमा त्यो कथोपन्यासका केही भागहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । उत्कृष्ट विषयवस्तु नवीन लेखन शैली र कलात्मक प्रस्तुतिमा सन्तुष्ट नभई म कथा लेख्दिनँ त्यसैले मेरो कथालेखनलाई पातलो मान्नुपर्दछ। कविता र गजल विधालाई चाहँदाचाहँदै पनि स्तरीयतामा लान सकेकी छैन । एउटा निबन्धसङग्ह 'सिर्जना र सन्त्रास' छापिने तयारीमा छ ।
यसबाहेक तपाईको साहित्य सम्बन्धमा केही कुरा भन्न बाँकी छ भने बताइदिनुहोस् ?
- हाम्रो देशको साहित्यिक क्षेत्र अत्यन्त उपेक्षित अवस्थामा छ । बालबालिकादेखि नै साहित्यको लगाव बढाउनुपर्छ । यहाँ अभिभावकहरू शौखका लागि फैशनका लागि हजारौँ रुपैया खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ तर बच्चालाई एउटा पुस्तक किन्न गारो मान्नुहुन्छ । मेरो लामो शिक्षण पेशाले यस्ता धेरैकुराको अनुभव बटुल्ने मौका पाएकी छु । सबै अभिभावकले पाठ्यपुस्तक बाहेक बच्चाहरुलाई बाहिरी पुस्तक पढाउने बानी पनि बसाल्नुपर्छ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्र दुवैतर्फाट साहित्यलाई उचित स्थान दिइनुपर्छ । यहा धेरै लेखकहरु प्रकाशकबाट ठगिएका छन् । प्रकाशनको उचित व्यवस्था हुनर्ुपर्छ र अन्य साहित्यिक गतिविधिलाई महत्व दिइरहनुपर्छ । साहित्यिक क्षेत्रमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा , खुट्टा तान्ने प्रविधि, आफू मात्र सबैपदमा बसू, आफू मात्र सुविधा भोग गरुँ, आफ्नो मात्र हालीमुहाली होस भन्ने प्रवृृत्तिले साहित्यिकार स्वयम्ले पनि त्याग्नु पर्दछ । एउटा विदेशी हिरोले राम्रो कार किनेर आफ्नो भाइलाई उपहार दिएको समाचार बन्छ तर एउटा साहित्यकारले राम्रो पुस्तक लेखेर विदेशी पुरस्कार पाएको समाचार बन्दैन । प्रत्येक कुरालाई नाफनोक्सानमा तौलेर हेरिने हाम्रो समाजमा अनुत्पादक क्षेत्र साहित्य सधै उपेक्षित रहिरहेको छ । साहित्यक्षेत्र मौलाउन र्सवप्रथम देशको राजनैतिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसैले देशले राजनैतिक निकाशा पाउन हामी सबैले नीजि स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रको र जनताको हितमा अघि बढौँ ।
12:40 PM कथा
जीवनको यो मोडमा आएर पनि म एउटा कथाका यी हरफहरू बारम्बार दोहोर्‍याई-तेहर्‍याई प्रायः पढ्ने गर्दछु ।
एउटा परस्त्रीले परपुरुषसँग गर्ने प्रेम सधैँ अवैधानिक हुन्छ । यस्तै मान्यता र संस्कारबाट परिपोषित थिएँ म । त्यसैले यस्ता प्रेमका कथाहरूलाई जहिले पनि गैरकानुनी आँखाले हेर्थ अनि क्षणिक आवेगात्मक तिर्सना र मुर्ख्याइको संंज्ञा दिन्थे । यस्ता कथाहरू प्रचलित सामाजिक संस्कारप्रति पनि कडा अव्यावहारिक प्रहार हो भन्ने ठान्दथेँ । तर होइन रहेछ , प्रेमको परिभाषा असीमित र अपरिमित रहेछ । प्रेम जहाँ पनि जसरी पनि फुल्न सक्दो रहेछ । तर त्यो पवित्र हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अहिले म मान्यता दिन थालेकी छु ।
तिमीले दिएको प्रेम मेरोलागि एउटा शाश्वत र स्वीकार्य थियो । तिमीले सत्यको पक्ष लिएका थियौ । संसार सारा मेरो विरुद्ध एक हुँदा तिमीले मेरो साथ दियौ । मेरो लागि बौद्धिक वकालत गर्‍यौ । तिमीले सत्यलाई विजयी बनायौ अनि मलाइ विजयी बनायौ । हो, यसरी विजारोपण गर्‍यौ तिमीले हाम्रो मायालाई । त्यो मायामा आदर्शता अनि सत्यको आकर्षा थियो । त्यसमा न त क्षणिक आनन्द थियो न त यौनतृप्तिको चाहना । त्यो नदेखिएको अनि नछोइएको माया अति पवित्र थियो । यदि त्यो छोइएको र देखिएको भए अपवित्र र दूषित हुन सक्दथ्यो । त्यो माया सिप्पिभित्रको मोतीझँ पवित्र र शुद्ध थियो । त्यहाँ न कुनै दाग थियो न कुनै क्लेश ।
मायामा नै सृष्टि हाँस्छ अनि सिर्जना फुल्छ । हो, तिम्रो मायाले मलाई परिभाषित जीवन बाँच्न लालायित बनायो । मायाको त्यो राप यति रापिलो थियो, त्यसमा धेरै इष्र्या, डाहहरू जलेर खरानी हुन सक्थे । त्यसैले त्यो राप म सधैँ तापिरहन चाहन्थेँ । तर भौतिकवादी जीवनले आर्दशवादी जीवनलाई बाँच्न दिदैन । त्यसैले व्यवहारले तिम्रो र मेरो मायाबीच धेरै तगारो हाल्न आइदिन्छ तर म त्यसलाई अग्निपरीक्षाको अर्को रूप मान्न पुग्दछु । यसै अग्निपरीक्षामा तिम्रो मायालाई सुरक्षित राख्न धेरै कोसिस गर्दछु । किनभने जीवनको मोडमा धेरै घटनाहरू घट्दछन् । तर सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा घटना तिम्रो र मेरो मायाको वीजारोपण भएको पवित्र घटना हो । म यसैमा बाँच्न चाहन्छु यसैमा हराउन चाहन्छु अनि यसैमा आफूलाई भुल्न चाहन्छु । किनभने मैले कहिल्यै मायाको त्यो राप पाइनँ जुन मायामा उमङ्ग हुन्छ, उत्साह हुन्छ अनि जीवनप्रति सचेत भएर अघि बढ्ने सपनाहरू हुन्छन् ।
म देख्छु तिम्रा आँखाहरूमा मेरा सफलताका लागि अभीष्ट तैरिरहेको अनि म त्यसलाई पढेर बुझन खोज्दछु । मेरो अँध्यारो मुखसँग त्रि्रा भावहरू कुण्ठित हुन पुग्दछ्न् । अनि त्रि्रा दुखित भावहरूसँगै थाहा नै नपाई म पीडित भइरहेको हुन्छ । सबै कुरा चाहेर हुँदैन अनि सबै नचाहेका नहुन पनि सक्दैनन् । त्यसैले यसलाई नै प्रेमको अर्को रूप मान्न सकिन्छ । म तिमीदेखि भागेर टाढा जान खोज्दछु । तर समय र परिस्थितिले हाम्रो प्रेमलाई यति नजिक बनायेा कि त्यो कहिल्यै टाढिन नै सक्दैन । सायद उचित मलजल र उचित वातावरणले यसलाई मौलाउँदै लग्यो । त्यो झाँगिएर एउटा विशाल वृक्ष बन्न पुग्यो । जसको छहारीमा हामी सुस्ताउन थाल्यौँ ।
केही समय अगाडिदेखि एउटा सानो आत्मीयताको डोरीबाट शुरु भएको हाम्रो प्रेमले एउटा दह्रो झोलुङ्गे पुल बनाइसकेको छ । जहाँबाट हाम्रा अव्यक्त भावहरू ओहोरदोहोर गर्दछन् अनि अप्रत्यक्ष रूप्ामा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त हुन पुग्दछन् । एउटा दह्रो प्रेमको लागि सुन्दर आत्मा हुनपर्दछ अनि स्वच्छ विचार पनि । जसमा प्रेमका सुन्दर फूलहरू म्ाुस्कुराउँदै फुल्न सक्दछ । कहिलेकाहीँ नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी हाम्रो प्रेममा तीखा काँडा उमार्न पुग्दछँै । त्यसको घोचाइवाट म पिडीत हुन पुग्दछु । तर त्यस दुखद अनुभूतिलाई म हाँसी-हाँसी स्वीकारिरहेको हुन्छु । सायद तिमी पनि मर्माहत बन्न पुग्छौ होला । अनि यसको समाधानका लागि हामी सोच्न बाध्य हुन पुग्दछौँ । प्रेममा मुटु दुख्नु स्वभाविक हो । जसमा मिठास हुन्छ स्वर्गीय आनन्द हुन्छ । जसले प्रेमलाई माझ्दछ अनि नौनी खर्‍याएझैँ खर्‍याउँदछ । माझिएर, खारिएर निस्केको प्रेम विशुद्ध हुन्छ । त्यो आत्मीय प्रेम स्वीकार्य पनि हुन्छ । तिमी मजतिको भावुक नहुन पनि सक्छौ । तिमीले जीवनको सबैभन्दा ठुलो मान्यता व्यवहारलाई दिएका छौ । तर म व्यवहारसँग सिद्धान्त खोजिरहेछु । म जीवनलाई कलात्मक रूपमा आदर्शताले सजाउन चाहन्छु । त्यो तिमीमा नहुन पनि सक्छ ।
कहिलेकाहीँ अचेतन मन उड्न खोज्दछ, स्वतन्त्र भई अनि बहकिन थाल्दछ प्रेमको वासनासँगै । तर यो असान्दर्भिक हुन पुग्दछ हाम्रो जीवनको लागि । त्यसैले त म यसलाई बाध्न चाहन्छु र लगाम दिन चाहन्छु । यो आवश्यक पनि छ किनभने लगाम विनाको घोडाले कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अनि नबाधिएको हाम्रो माया पोखियो भने धेरै कुरो बगाउन सक्दछ । त्यसैले समाज व्यवहारबाट अछुत राखेर म हाम्रो माया बाध्न चाहन्छु ।
मसँग प्रेमको भण्डार छ । किनभने म जीवनलाई पीडादायी बनाएर बाँच्न चाहन्नँ । मैले निस्वार्थ प्रेम खर्च गरिसकेकी छु । तर तिमीप्रतिको मेरो प्रेममा अकै लगाव छ, अर्कै आकर्षा छ । प्रेमको अन्तिमरूपी मिलनलाई म मान्दिनँ । अमर प्रेम जहिले पनि मिलनमा बिलाउँदछ । हाम्रो प्रेम नवयौवनाहरूले क्षणिक आनन्दमा रमाउने प्रेम होइन । हाम्रो प्रेम शाश्वत हो, सत्य हो अनि अमर हो । जुन प्रेम सूर्यको किरणसँगै, फूलको वासनासँगै , क्षितिजको उषासँगै हाँसिरहन्छ अनि बाँचिरहन्छ ।
यस्तै अभिव्यक्ति पोखिएको थियो उनको कथामा । उनको कथा प्रकाशित हुँदा निकै हलचल भयो रे । अन्त्यमा यही कथाको कतिपय अंशले उनको श्रीमान्सँग पारपाचुके भएकेा कुरा हल्ला मार्फ मेरो कानमा परेको थियो । यो कथा प्रकाशित भएपछि उनका श्रीमान्लाई अफिस सकिएपछिको खाजासँगै उसका साथीहरूले कथाको प्रसङ्ग उठाइ "भाउजूको मनको मन्दिरमा अरू कोही छ, जस्तो छ बिष्णुजी, साहित्यकारहरूको विश्वास हुँदैन" भनेर शङ्का उपशङ्काका बीउ मस्तिष्कमा छरिदिएका थिए रे ! अनि त्यही बीउ झंगिएर वृक्ष बनेर ढल्यो रे ! उनको भाग्यमा मैले यस्तै हल्ल्ाा सुनेको थिएँ ।
एकदिन हामी सबै साहित्यिक भेलामा रमाउन पुगेका थियौँ । त्यो दिन घर जान ढिलो भएको थियो । उनका श्रीमान् धेरै समयसम्म ताला लगाएको ढोका रुँगेर बसे रे । यसै निहूँमा गूढ कुरा अर्कै पोखियो रे उसमाथि । झगडाको बीउ चर्कदै गयो । उनले भनिन् रे कथाकारले जे पनि लेख्न सक्छ । त्यो वास्तविक नै हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय काल्पनिकतामा फूलबुट्टां पारेर लेखिन्छ । सबै कथा आफ्नै परिवेशमा मात्र हुँदैन । तर जति नै सत्य ओकले पनि उनका श्रीमान् मान्न तयार भएनन् रे ! उनी आफनो स्वतन्त्र लेखकीयतामा अरूको हस्तक्षेप मन नपराउने स्वभिमानी महिला थिइन् । त्यसैले उनीहरूको सहचर्या धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । अनि एकदिन पारपाचुकेमा गएर टुङ्गियो उनीहरूको कलह ।
साहित्यिक गतिविधिमा भाग लिने क्रममा धेरै समय हामीसँगै हुने गथ्यौँ ।
मलाई थाहा थिएन उनको कथामा कतिको यथार्थ थियो वा थिएन भनेर । तर कतिपय ठाउँमा सत्यको पक्ष लिने क्रममा म उनलाई साथ दिने गर्दथेँ । यो क्षेत्रमा इष्र्या, डाह र खुट्टा तान्ने प्रवृति भएको हुनाले म सधैँ उनको निश्चल र शुद्ध व्यवहारको पक्ष लिने गर्दथे । जीवनलाई सिर्जनात्मक र कलात्मक बनाएर सजाउने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सर्म्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसक्रममा कोही पनि कसैको व्यक्तित्वसँग प्रभावित हुन सक्दछ अनि त्यसको सुगन्ध सिर्जनामा फैलिएको पनि हुन सक्दछ । तर यहाँको समाजको संकिर्णताले त्यस सुगन्धलाई दुर्गन्धित बनाई फैलाउने प्रयास गर्दछ । त्यसमा अद्वितीय प्रतिभाहरू मुनामा नै ओइलाउन सक्दछन् ।
हाम्रो समाजले त्यति धेरै पाचनशक्ति पैदा गरिसकेको छैन जसले एउटा विवाहिता महिलाले कसैमाथि प्रेम गरेको कुरालाई सजिलै पचाउन सकोस् । यहाँ पुरुषहरूले जे पनि गर्न सक्छन अनि जे पनि लेख्न छुट छ । उसले खुुलारूपमा कसैलाई प्रेमको उजगार गर्न सक्छ अनि दुइटी र तीनवटीको पतिपरमेश्वर बनेर मर्दको उपाधि जित्न सक्छ । तर एउटी महिलाले स्वतन्त्र रूपले लेखेर काल्पनिकतालाई अँगालो मार्न पनि सक्दिन । उनको श्रीमान्ले मसँगको उसको सम्बन्धलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरेको कुरा चर्चा मार्फ मैले पनि सुनेको थिएँ ।
मैले पनि मेरो एउटा कथामा उनको कथामा पोखिएको भावजस्तै पोखेको थिएँ । तर म पुरुष थिएँ त्यसैले कसैले मेरो प्रतिकार गर्न सक्दैनथ्यो । तर उनले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने क्रममा ठूलो सजायको भागीदार हुनुपर्‍यो । यो समाजको दोष थियो अनि उनको श्रीमान्को प्रवृति र विचारको यसमा मैले गर्न सक्ने हिम्मत केही थिएन सबैले आ-आफ्नो भागको पीडा आफैले बोक्नुपर्दछ । त्यो अरूले बोकिदिएर हुन्नरहेछ । हुने भए म उनको सम्पूर्ण पीडा बोकेर उनलाई सुखै सुख मात्र दिन चाहन्थेँ । तर यो सम्भव थिएन । त्यसपछि उनको र मेरो समिप्य टुङगिएको थियो । किनभने शङ्काका बीउहरू असरल्ल छरिएका थिए हाम्रा वरिपरि । त्यसैले यसको निवारण गर्न मैले धेरै कोसिस गरे तर सब र्व्यर्थ भए । उनको जिन्दगीमा यति ठूलो बज्र पर्न गयो जुन म मूकदर्शक भएर हेरिरहन बाध्य भएँ । आफ्नो प्रिय बस्तु, मुटुको टुक्रा एक्लोपनमा दुखी जिन्दगी काट्नु पर्दा मलाई पनि मुटु नदुखेको होइन । यसै दुखाइले एकदिन मलाई उनी भए ठाउँमा पुर्‍यायो । मैले विकल्पको खोजी गर्दै प्रश्नको मियो तेर्साएको थिएँ उनको अगाडि -"तपाईको जीवनप्रति मलाई सहानुभूति छ । यो सबको कारक म नै हुँ कि -"
उनले मेरो प्रश्नको मियोमा विचारहरू पोख्तै भनिन् -"मेरा सिद्धान्तहरू बन्धक छन् । त्यसैले मैले आफूलाई स्वतन्त्र राख्न चाहेको हो । यसमा तपाईको कुनै दोष छैन । यो मेरो भाग्यको दोष हो । अनि यथार्थको प्रतिबिम्ब पनि । तपाई र मेरो पवित्र सम्बन्धलाई नकारात्मकरूपले मात्र हेरिएन मेरो सिर्जनशीलतालाई नै ठूलो चुनौति भएको हुनाले जिन्दगीलाई सम्झौता गर्ने क्रममा मैले यो निर्णय लिनुपर्‍यो । हाम्रो पवित्र सम्बन्धलाई नै मैले जीवनको मूल उद्देश्य लिएर बाँच्ने प्रण गरेकी छु ।
उनले हाम्रो सम्बन्धप्रति नै उत्सर्ग जाहेर गरेकी थिइन् । मलाई धेरै वर्षम्म उनको लागि केही गर्न सकिनँ भनेर पश्चाताप भइरह्यो । समयको वहासँग उनको मेरो सम्बन्ध टाढिदै गयो । अतीतको कुहिरोले हाम्रो सम्बन्धलाई धमिलो बनाउँदै लग्यो ।
ओ ! अपराजिता !
4:46 PM कथा
जीवन एउटा सपना हो । मेरो जीवनको सपनामा यी शब्दहरू ब्युँझिरहन्छन् । तिमीले फेरि हराएकी छ्यौ मलाई । म तिमीलाई जित्न चाहन्थेँ । तिम्रो खोट देखाएर त्रि्रा सिद्धान्तहरूलाई पर्छार्न चाहन्थेँ । तिम्रो कमजोरी औँल्याएर तिमीलाई नैतिक रूपले गिराउन चाहन्थेँ । तर तिम्रो आदर्श बोली र सहृदयी भावयुक्त मृदुलवचनले म मर्माहत भएको छु । मेरो रिस र आवेशलाई कसरी आगोको अगाडि नौनी गलाएझैँ गलाएकी छौ । जब म तिमीलाई पराजित पार्न हर सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्छु म आफैँ पराजित हुन पुग्छु । त्रि्रेँ निष्कपट र कठोर आत्माभिमानका पाइलाअगाडि म प्रत्येक पल लड्खडाउँछु । अपाङ्ग्ा तिमी छौ तर निःसहाय म हुन पुग्छु । अबला तिमी छौ तर सबलताका प्रत्येक लक्षणहरू म गुमाइरहेको छु । मैले जिन्दगीमा हार्न कहिल्यै जानिनँ । मैले आफूमा चेतनाको पर्दा उघारेदेखि कहिल्यै हार खान जानिनँ । प्रत्येक ढुक्ढुकीमा मैले जित्नु नै पर्छ भन्ने उच्छ्वास सुनेको छु । त्यसैले तिमीसँगको हारलाई मैले जीवनका धेरै अमूल्य जीतहरूमध्ये एउटा अमूल्य हार ठानेको छु ।
तिमीसँगको मनोयुद्धमा म प्रत्येक पल हारिरहेको छु अनि तिमीले मलाई हराइरहेकी छ्यौ । हाम्रो अघोषित युद्ध कहिले र कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन तर म जहिले मौका पाउँछु तिम्रो स्वाभिमान र सिद्धान्तमा मर्म हुने गरी प्रँण?बाणहरू प्रहार गर्छु तर तिमी अघोषित विजेताझैँ प्रत्येक प्राणबाणबाट बच्न आफूले आफैँलाई तयार पारेर राखेका हुन्छौ । अनि म आफैँ आत्मग्लानिबाट लुप्त हुन्छु कतै प्रस्फुटन गर्न नै नसक्ने गरी ।
जीवनमा धेरै दुःखका सँघार काटेकी छ्यौ तिमीले । धेरै पीडाका बिस्कुन फिँजिएका छन् तिम्रो भाग्यका आगँनमा । धेरै खुसी र चाहनाहरू डढेका छन् तिम्रो अँगेनीमा । तिमीले संसार देखेकी छ्यौ अनि भोगेकी छ्यौ । तिमीले समाजका धेरै चुनौती हाँसीहाँसी स्विकारेकी छ्यौ । तिमी समाजसँग लडिरहेकी छ्यौ । म मात्र तिमीसँग लडिरहेछु, न तिमीलाई जित्न सक्छु न त युद्धको मैदानबाट भाग्न सक्छु । यसमा मेरो विवशता छ । तिम्रो आदर्श, आत्मीयता, सहनशीलता र परिपक्व बौद्धिकताले मलाई तिमीसँगको सत्सङ्गलाई लोभ्याइरहन्छ । त्यसैले म यो युद्धबाट भागेर जान चाहन्नँ । तिमीले सायद कर्ण्र्ााच पहिरकी छ्यौ जसलाई म छिचोल्न सक्तिनँ । इन्द्रले झैँ ढाटेर वा छलेर तिमीलाई पराजित बनाउन सक्छु होला । तर ढाँटेर छलेर जितेको युद्धलाई मेरो स्वाभिमानले स्विकार्न सक्तैन ।
तिमी हेर्दा साधारण छ्यौ । तर मेरा लागि असाधारण लक्षणका बिम्व हौ । क्यानभासमा कोरिएको अमूल्य चित्रझैँ । कहिले बुझ्न खोजेर पनि बुझ्न नसकिने । मलाई थाहा छैन तिमीभित्र अरू पनि धेरै कुरा केके छ भनेर यसैले धेरै कुरा थाहा पाउन म तिमीलाई नयाँ-नयाँ चुनौती दिइरहेको हुन्छु । जसको प्रतिकि्याबाट निस्केका नतिजा मेरा लागि अमूल्य हुन्छन् । म जहिले पनि तिम्रो विजयको सपना देखिरहेको हुन्छु । सफलताको उत्कण्ठा-चाहना गरिरहेको हुन्छु । तर म आफैँ तिमीलाई आफूबाट पराजित बनाउन खोजिरहेको छु । मलाई थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ । म तिमी अरूबाट पराजित भएको देख्न सक्तिनँ । तिमी पराजित हुनु भनेको म पराजित हुनुझैँ लाग्छ । तर म स्व्ायं तिमीबाट पराजित भई मेरो सामुन्ने उभिएको हेर्न चाहन्छु । त्यसैले तिमीलाई पराजित बनाउन म कुनै न कुनै सूत्र अपनाइरहेको हुन्छु । तर मेरा प्रत्येक सूत्र असफल भइरहन्छन् । जीवनमा धेरै सूत्र जोडेर सफल जीवन बनाउन सक्षम म तिमीसँग कुनै एउटा सूत्रमा पनि सफल हुनसकेको छैन । यो मेरो विडम्वना मान्नर्ुपर्छ । त्यसैले म तिमीलाई किन्न खोज्दै छु आफ्ना सम्पपूर्ण अवयवहरू खर्च गरेर ।
तर तिमी स्वाभिमानका धनी छ्यौ । अनि मेरा अनुग्रहहरूलाई सजिलै लत्याइदिन्छौ । तिमीलाई अभावको महासागर तर्नुपर्दा अप्ठ्याराका उकालो चढ्नुपर्दा पनि मेरो अनुग्रहलाई बिनामूल्यको ठान्न पुग्छौ । तिम्रो निश्चल, अटल आत्मविश्वासका अगाडि मेरा सम्पपूर्ण सूक्ष्म हुन पुग्छन् ।
म तिमीलाई समाज र समयसँग किन्न चाहन्छु । तर तिमी आश्रति भएको स्विकार्न चाहन्नौ । म तिम्रो नैतिक र्समर्थन चाहन्छु । अनि तिमीबाट सर्वोत्कृष्ट भएको हेर्न चाहन्छु । तिमीलाई मप्रति आश्रति, अनुगृहीत र समर्पित भएको हेर्न चाहन्छु । तर तिमी मेरा चाहना र इच्छाहरूलाई कुठाराघात गरिदिन्छौ । म आफैँ नै तिमीबाट पराजित भइरहेको हुन्छु । तिमीले खुसीसाथ आफूलाई पराजित बनाएर मप्रति समर्पित गरेको म चाहन्नँ । यो मेरा लागि सहानुभूति हुनेछ । त्यसैले म तिम्रो सहानुभूति र अनुग्रहमा बाँच्न पनि चाहन्नँ । म तिमीलाई आफैँबाट जित्न चाहन्छु ।
प्रत्येक दर्ुइ वस्तुको र्घष्ाणबाट कुनै शक्ति वा पदार्थ पैदा भएझैँ हाम्रा प्रत्येक शीतयुद्धबाट मैले केही न केही अनुभव प्राप्त गर्दै गएको छु । जुन मेरा लागि समुद्रमन्थनपछिको प्रँप्त वस्तुझैँ भएका छन् । मैले कहिले कालकूट विषको सेवन गर्नुपर्छ त कहिले अमृतपान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । म ती वस्तुहरूलाई आत्मसात् गर्न बाध्य हुन्छु । त्यसैले म तिमीसँग न त युद्धविराम गर्न सक्छु न त पराजयको यथार्थ स्विकार्न सक्छु । म युद्धविराम गरेर तिमीबाट टाढा भाग्न पनि सक्तिनँ किनभने तिमीसँग युद्धविराम गरेँ भने मेरा जीवनमा शून्यताको बिराम लाग्न सक्छ । जीवनमा शून्यताको बिराम लाग्यो भने जीवन अचल र उद्देश्यविहीन हुन पुग्छ । त्यसैले जीवनलाई पपूर्णता दिन पनि म तिमीसँग सत्यको युद्ध गरिरहेको छु । म आफ्नो सम्पपूर्ण कला, सीप र बौद्धिकता खर्चेर तिमीलाई तिमीबाट प्राप्त गर्न चाहन्छु । तिमीलाई हराउन चाहन्छु । तर खै, कसरी, कहिले र कहाँ तिमी मबाट पराजित हुन्छौ म भन्न सक्दिनँ, ओ ! अपराजिता !
तिमी असहाय, गरिबहरूको लागि कसरी तर्क गर्र्छौ , जसलाई खण्डन गर्न मेरो सामर्थ्यले कहिल्यै भ्याउदैन । मेरो सामन्तवादी सोचले गरिब, निमुखाको विषयमा सोच्ने शक्ति खर्च गर्न नै सकेनँ । तर तिमीले मेरो सोच र धारणामा नयाँ परिवर्तन ल्याइदिएकी छ्यौ । त्यो लेउ लागेको परम्परागत संस्कारलाई माझिदिएकी छ्यौ । समय परिवर्तनसगै मान्छे आफूले आफैलाई परिष्कार गर्दै लानु पर्दछ । तर मैले आफूलाई त्यो सोचमा कहिल्यै ढाल्न सकिनँ । म यही समाजमा पुरुषत्वको हुकार र्छर्दै झुकेँ । मैले जीवनको त्यो अध्यारो पाटो देख्दै देखेको रहेनछु । जहाँ निमुखा, असहाय र पिडीतका आकृतिहरू सल्बलाइ रहेका हुन्छन् । मैले आफ्नै विचारहरूलाई सर्वोत्कृष्ट मानेँ, आफैलाई सम्पपूर्ण मानेँ । तर म यो सोचबाट बाहिर जान पनि म सक्दिनँ । ओ अपराजिता ।
डायरीका यी हरफहरू म उसलाई देखाउन चाहन्छु । म चाहन्छु उसले मलाई पढोस् र नयाँ बाटो देखाओस् अनि यो यद्घले सधैँको लागि विराम लिओस् । तर म सधैँ असफल हुन्छु । ऊ र म दर्ुइ धारमा बगेको प्राणी हौँ । तर समयले उसलाई र मलाई यसरी भेट गराइदियो । सायद समयपनि इष्र्या गर्दो हो हाम्रो मनोयुद्घ देखेर । मेरो कम्पनिमा इटरभ्यू दिन आउँदा नै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ ऊ भित्र यति धेरै कुराहरू छन् भन्ने । इटरभ्यूको समयमा नै उसले अप्रत्यक्षरूपले चुनौति दिइसकेकी थिई । त्यसैले पनि म उसको स्वाभिमानलाई पराजित पार्न मैले उसलाई नियुक्ति दिनु परेकोथ्यो । तर म उसका प्रत्येक तर्कवितर्कले पराजित हुँदै गएँ ।, अनि आफूदेखि हार्दै गएँ । हुन त यो समयले दिएको उपहार पनि थियो उसलाई किनभने समाजमा चारैतिर नयाँ चेतना , नयाँ जागरणको लहर चलेको थियो । कम्पनिका कतिपय काम कारवाहीमा चित्त नबुझ्दा आवाज उठाउने ऊ नै हुन्थी । बोनस दिने कुरादेखि लिएर युनियन बनाउने कुरासम्ममा ऊमाथि नै हुन्थी । म प्रत्येकपल उसलाई हराउने कोसिसमा लागेको हुन्थेँ । तर म उसलाई जिते पनि आफूबाट कहिल्यै जित्न सकिनँ । त्यसैले म समयको त्यो प्रतिक्षामा छु । जुन समय म उसलाई यो डायरी देखाउन सक्षम हुनेछु । सायद म यो प्रयासमा पनि असफल नै हनेछु । पराजयको समय श्रृङ्खलाले मभित्र एउटा पहाड उभ्याउन सक्छ जुन पहाडमा बसेर म चिच्याउन सक्छु "ओ अपराजिता तिमी कहिलेसम्म पराजयको बादलले मलाई ढाकिरहन्छौ ? कहिले सम्म ??